Malaayiin Xujeey ah oo maanta istaagaya Banka Carafo , Rukniga ugu weyn xajka. – Hornafrik Media Network
Malaayiin Xujeey ah oo maanta istaagaya Banka Carafo , Rukniga ugu weyn xajka.
By HornAfrik	 On Aug 20, 2018
Hornafrik-Soomaalida sanadkan xajineysa ayaa saakay ka soo ambabaxay degaanka Mina iyaga oo ku soo jiheystay degaanka Carafo, halkaasi oo muslimiinta ku gudanayaan mid ka mid ah Rukniyada ugu muhiimsan Xajka.
Ciidamo aad u fara badan ayaa la soo dhiibay wadooyinka waa weyn ee magaalada Maka Al-mukarama, waxaana gawaarida laga mamnuucay isticmaalka wadooyinka masaajida barakaysan ee Xaramka u jira 2-KM.
Wasiirka Xajka iyo Cumrada ee Sacuudiga Dr. Maxamed Saalax ayaa wuxuu sheegay inay laba laabeen dadaalka iyo u adeegista martida dhulka barakeysan, gaar ahaan xujeyda Soomaaliyeed.
Dadyowga Islaamka ayaa berri isu diyaarinaya inay u dabaal degaan maalinta Koowaad ee Ciidul Adxaa oo ka mid ah Ciidaha muslimiinta.
Senatorada Aqalka Sare oo Jubada Hoose u tagay xalinta Beelo Dagaalamay.
weerar dad ay Ku dhinteen Oo Ka dhacay G/Mudug